The MYAWADY Daily: April 2015
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၇)
SportsView(Vol 4,No 17)
Posted by myawady at 11:16 AM No comments:
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၃၀-၄-၂၀၁၅) ကြာသပတေးနေ့
မင်းဝံတောင်တွင် သစ်ပင်များ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးသင့်
စစ်ကိုင်း ၊ ၂၉-၄-၂၀၁၅
ယခင်က အမြဲစိမ်းတော များဖြင့် ဖုံးလွမ်း နေခဲ့သော မင်းဝံတောင်ရိုး တွင် သစ်တောများ တဖြည်းဖြည်း ပြုန်းတီးလာပြီး အချို့သော နေရာများတွင် တောင်ကတုံး ဖြစ်သည်အထိ သစ်ပင်များ မရှိတော့ သဖြင့် မင်းဝံတောင်တန်း များ စိမ်းလန်း စိုပြည်လာစေရန် နှင့် ရာသီဥတု ကောင်းမွန်စေရန် အတွက် သစ်ပင်များ ပြန်လည် စိုက်ပျိုးသင့်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် သည် ၄၃၈ ဒသမ ၁၆ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းပြီး အပူပိုင်း ရပ်ဝန်းဇုန် တွင် တည်ရှိသော်လည်း လူတို့ စိုက်ပျိုးထားသော ဥယျာဉ်ခြံမြေ များကြောင့် အမြဲစိမ်းမြေ ၂၆၈၅ ဧက၊ သဘာဝ သစ်တောမြေ ဧက ၂၉၅ဝ ရှိခဲ့သဖြင့် အပူလွန်ကဲမှု ဒဏ်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား မခံစားရကြောင်း ယခု နောက်ပိုင်းတွင် သဘာဝ သစ်တောမြေများ မှ သစ်ပင်များကို ထင်းအဖြစ် ခုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ တောမီးရှို့၍ စိုက်ပျိုးမြေများ ချဲ့ထွင်လာခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ကျောက်များတူးခြင်း၊ လမ်းဖို့ရန် ကျောက်ဆွေး တူးယူခြင်း တို့ကြောင့် သစ်ပင် သစ်တောများ နည်းပါး လာကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာက လျှပ်စစ်မီး မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ထမင်းဟင်း ချက်ဖို့အတွက် ထင်းကိုအဓိက ထားရတယ်။ အများစု ကလဲ ဝင်ငွေနည်း တောင်သူတွေ ဆိုတော့ တခြားဒေသက ထွက်တဲ့ ထင်းကို ဝယ်မသုံးနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ မင်းဝံတောင်ရိုး ပေါ်တက်ပြီး ထင်းခုတ် ကြရတယ်။ အရင်က တောင်ပေါ်မှာ သစ်ပင်က ပေါတော့ ထင်းတင် မကဘူး။ စားစရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပါ ရတယ်။ တချို့ဆို လိုက်ခူးပြီး ဈေးထိ သွားရောင်း ကြတော့ အပိုဝင်ငွေပါ ရတယ်။ အခုကျတော့ ထင်းခုတ်လွန်း အားကြီးပြီး သစ်ပင်တွေ မရှိတော့ စားသုံးသီးနှံပင် လေးတွေပါ သေကုန်ပြီ။ ရာသီဥတု ကလဲ အရင်ကထက် ပိုပူလာတယ် .. '' ဟု မင်းဝံတောင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း ထုံးဘိုရွာမှ ဒေသခံတစ်ဦး က ပြောပြသည်။
ထိုသို့ ထင်းခုတ်ရုံ သာမက ကျောက်တူး၍ပါ ရောင်းကြသဖြင့် ယခင်က သဘာဝအတိုင်း လှပနေသော မင်းဝံတောင်တန်းမှာ လိုဏ်ဂူများ တောင်ပြတ်များ အဖြစ် တွေ့နေရပြီး မိုးများသော နှစ်များ၌ တောင်ပြိုမှုများ မကြာခဏ တွေ့ရကြောင်း၊ ထိုသို့ မဖြစ်စေရန် လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသော ကျေးရွာများကို ရွာပိုင် ထင်းစိုက်ခင်း သတ်မှတ်၍ စိုက်ပျိုးစေပြီး စနစ်တကျ ခုတ်ယူသုံးစွဲ စေသင့်ကြောင်း၊ ထို့နောက် ကျောက်ကုန်းများ အတိ ဖြစ်နေသော မင်းဝံတောင် ကိုလည်း သစ်ပင်များ ရှင်သန်အောင် စိုက်ပျိုးပြီး ပြန်လည် စိမ်းလန်း လာအောင် ဆောင်ရွက် သင့်ကြောင်း၊ သို့မှသာ သဘာဝ ဂေဟစနစ် ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာပြီး စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အဓိကကျသော ရာသီဥတုမှာ မျှတလာမည် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းမြို့နယ် သစ်တောဦးစီး ဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ပြောပြ၍ သိရသည်။
Thanakha to protect ourselves from ultraviolet rays
= Shwebo Thiri Malar =
Even after the terrible Nagis cyclone school children were still fi ne-looking with Thanakha on their faces. Thanakha is cherished by all the people of every age, all walks of life and both genders in Myanmar. Once I met withawoman wearing Thanakha on her face while onavisit to the United States of America. When I asked her whether she was actually wearing Thanakha, she told me that she wasaMyanmarborn Chinese living in the US, explaining that the beautifier she was wearing was called Myanmar Thanakha which had the power to beautify the skin and refresh the mind and body. “Whatashame!” I said to myself as I was wearing makeup then.
My grandma always sang the song praising the virtues of Thanakha whenever she grinded it onacircular flat stone. When I grew older, I began to love Thanakha. I thought my grandma always wore Thanakha on her face. Thanakha was alsoamedicine for her that could cure many illnesses.
Not only the city damsels but also the female blue collar workers and paddy transplanters love Thanakha too. The former wear Thanakha just to added facial beauty, but the former wear it for many other purposes including asasun-burn resistant agent. The Thanakha paste has the properties of making the skin cool and smooth, havingarefreshing and cool fragrance, beautifying the users. It also cures pimples and acne.
When we applied cosmetics to enhance our appearance atawedding ceremony, grandma always warned us to wash our face with water and soap as soon as we arrived back home. She said, “Cosmetics may have adverse effects especially on your face as they are made of chemicals.”
Really, wearing cosmetics for long hours make us feel bad. So we have to remove these agents from our skin and wear Thanakha again to make ourselves feel better.
There are many species of Thanakha, and of them Shwebo Thanakha is the most famous of its kind. Shwebo region isadry land located in northwest of Mandalay. As Shwebo Thanakha trees grow on the dry land surface formed with red rocky soil in the region, they haveathicker bark when compared with other species and can produce more fragrant liquid or paste (Thanakha liquid) that we apply on our face and body. Actually, Thanakha, the fragrant liquid powder of the bark of Muraya Exotica, induced by rubbing it round and round withalittle water onacircular fl at stone isaunique Myanmar traditional beautifier worn by Myanmar ladies, young and old alike.
According to Myanmar Thanakha compiled by U Tha Hla, the best known type of Thanakha during the reign of King Alaungmintaya was at Tabwet village on the west bank of Ayeywady River in KhinU township, Shwebo distrct. The court of that time acknowledged it as the Royal Thanakha.
The bark of Thanakha trees grew in the region was yellowish red in color. They were cut and sold at the court. But now the trees had already been rooted out, so that evenaThanakha tree the size of pointed finger is very rare to find.
Anyhow, Shwebo region is still renowned for its Thanakha that grows in its the red rocky soil. The color of Thanakha is ivory. It produces an aromatic Thanakha liquid that is rather sticky. Its taste is bitter than that of its cousins.
Shinmataung Thanakha is said to be worn by the queen of ancient city state Beikthano (Vishnu). Planted in the mid country, it is mostly used in the regions of lower Myanmar. Large plantations in Kyaukse, Pakokku, Taungdwingyi, Monywa, Ayadaw regions are producing Shinmataung Thanakha in huge quantities. It is whiter and less smooth than Shwebo Thanakha. As Shwebo Thanakha is smooth, aromatic and sticky, people who always wear it never wish to test any other kind of Thanakha. But the problem is that Shwebo Thanakha demand is much higher than the supply.
Large Thanakha trees can be found in Thabeikkyin, Tagaung and Kya-nyut at the east of Shwebo. Some call it Thihayaza Thanakha or Myaing Thanakha as they grow in Thihataw region. As the trunk is large, they are sawn and sold. When rubbed, they produce yellow Thanakha liquid that is less aromatic. But the liquid is sticky and smooth. Thanakha trees that grow in rocky soil have thicker bark that produces more Thanakha liquid than its cousins that grow in soft soil.
Some young women love to wear the sticky liquid produced from Thanakha roots. Mostly they produce yellow paste; some rub the roots together with shells. The paste is stickier and cooler than the paste from the barks. Its taste is bitterer and it is said to have higher level of medical properties.
Thanakha is grinding with machines to produce Thanakha cakes. One viss of cut Thanakha trunk can produce two viss of paste. We can get 0.8 viss of cakes when these two viss of substance were form into square-shape blocks and dried. Some people mixed other ingredients in making cakes. But pure Thanakha cakes are lighter than the ones mixed with other ingredients.
Cut Thanakha trunks are dried and then milled into powder. Thanakha roots produce yellow powder. Even young men applied Thankha power on their face as it protects the face from becoming oily.
There are also counterfeit Thanakha that is made from cut Thitpalway trunks which are similar to the real Thanakha trunks in appearance.
We the Myanmar women should use Thanakha instead of foreign-made cosmetics, as this practice can help cut foreign exchange expenditure of the state. Thanakha in reality isanatural substance that can refresh the mind and body and beautify the skin. What’s more it is aromatic.
Labels: Culture, Myanmar Traditional
Myanmar has 1,148 hotels nationwide
Yangon April 29
Myanmar has got 213 new hotels with 8,307 rooms in one year period from March 2014 to March 2015, according to sources from Ministry of Hotels and Tourism.
The number of hotels in Myanmar has now reached 1,148 with 45,331 rooms, said the ministry.
According to statistics of the ministry, the commercial capital Yangon has 298 hotels with 13,990 rooms. Meanwhile, the old royal city Mandalay has 148 hotels with 6,069 rooms; the administrative capital Nay Pyi Taw has 59 rooms with 4,904 rooms; the favorite destination of tourists the cultural showcase Bagan has 77 hotels with 2,484 rooms and Shan State’s major town Taunggyi and Inlay Lake has 93 hotels with 2,801 rooms.
Of the new 213 hotels, eight are in Nay Pyi Taw, 20 in Mandalay, 44 in Ngwe Saung Beach and 55 in Yangon.
Foreign companies have invested over 2.5 billion USD in 46 projects in hotel industry by the end of 2014 and Singapore is at the top of the list with over 1.5 billion USD investment invested in 20 hotel projects.
Last year, the country received over3million foreign tourists. Considering the current number of tourist arrivals, the demand for hotel room is below the supply, suggested tour operators. (447)
ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချလျက်ရှိသော ကလေးဖြည့်စွက်အစာ နှင့် နို့မှုန့်ဘူးတချို့တွင် FDA ၏ စစ်ဆေးထောက်ခံချက် ကို လိုက်နာသော အမှတ်တံဆိပ် နှင့် ကုမ္မဏီအနည်းငယ် သာရှိ
ရန်ကုန် ၊ ၂၉-၄-၂၀၁၅
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြည်ပနိုင်ငံ များမှ တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးလာသော ကလေး ဖြည့်စွက်အစာ နှင့် နို့မှုန့်ဘူး တံဆိပ်များအား ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချလျက် ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာန (FDA) ၏ ထောက်ခံချက် ရယူ စစ်ဆေးကာ တင်သွင်း ရောင်းချလျက် ရှိသော ကုမ္ပဏီမှာ အနည်းငယ်သာ ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၄ ရက်က ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာနမှ နို့စို့ကလေး နှင့် ဖြည့်စွက်အစာ စားသုံးရန် လိုအပ်သော ကလေးငယ်များ အတွက် ထုတ်လုပ် ထားသော အစားအသောက်များ ဈေးကွက် တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ အမိန့်အမှတ် (၂၂/၂ဝ၁၄)ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ယင်း ကြေညာချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ တင်သွင်း ရောင်းချမည့် နို့မှုန့်များကို မြန်မာဘာသာ အညွှန်းများ ပြန်ဆို၍ ရောင်းချမှု ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့ရာ ဒူးမက်နို့မှုန့် နှင့် လက်တိုဂျင်နို့မှုန့် စသည့်တချို့သော အမှတ်တံဆိပ် အနည်းငယ် တွင်သာ FDA ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အတိုင်း လိုက်နာမှု ရှိခဲ့ကာ ဈေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချလျက် ရှိသော ကလေး ဖြည့်စွက်အစာနှင့် နို့မှုန့်များကို တင်သွင်းနေသော ကုမ္ပဏီ အမြောက်အမြား ရှိနေသော်လည်း စနစ်တကျ သတ်မှတ်ချက်များ အတိုင်း မလိုက်နာဘဲ ရောင်းချနေမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ကလေးအာဟာရ ဖြည့်စွက်အစာ နှင့် ကလေးနို့မှုန့် များတွင် မြန်မာဘာသာ အညွှန်းပြန်ဆို ထည့်သွင်းရမည့် အမိန့် ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်မှာ ကိုးလခန့် ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ပြည်ပမှ တင်သွင်း၍ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချနေသော ကုမ္ပဏီတချို့မှာ လိုက်နာမှု မရှိသည့်အပြင် မူရင်း ရေးသားထားသည့် စာကို ဖျက်ထားကာ ရောင်းချ နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရ၍ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ နို့စို့ ကလေးငယ် များနှင့် ကလေးများ အတွက် အန္တရာယ် ရှိသောကြောင့် မြန်မာဘာသာ အညွှန်း မပါဝင်သော ကလေး ဖြည့်စွက်အစာ နှင့် နို့မှုန့်ဘူး များကို မဝယ်ယူ သင့်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: ထင်သာမြင်သာ ပြုပြင်စရာ, အစားအသောက်ဆိုင်ရာ
တရားမ၀င် သစ်တင်ယာဉ်များနှင့် သစ်များ သိမ်းဆည်းရမိ
သိမ်းဆည်းရမိသော တရားမ၀င် သစ်တင်ယာဉ်များ နှင့် သစ်များကို တွေ့ရစဉ်
နေပြည်တော် ၊ ၂၉-၄-၂၀၁၅
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ အောက်မိုင်းဟဲ ကျေးရွာအုပ်စု မိုင်းဖြတ် - ဘူရှီး ကားလမ်း တစ်ဝိုက်တွင် တရားမဝင် သစ်များ သယ်ဆောင် လာမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းအရ တပ်မတော်သား များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်း အဖွဲ့သည် ဧပြီ ၂ဝ ရက် နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ကားလမ်း တစ်လျှောက် ပိတ်ဆို့ ရှင်းလင်းရာ ဘူရှီးကျေးရွာ အနီး လမ်းဘေး သစ်တောအုပ် အတွင်း၌ တရားမဝင် သစ်များ တင်ဆောင် ထားသည့် တုန်ဖုန်းယာဉ် သုံးစီးကို သိမ်းဆည်း ရမိပြီး ယာဉ်မောင်း များမှာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခဲ့သည်။ ၄င်း တောအုပ်အတွင်း ဆက်လက် ရှင်းလင်းရာ တရားမဝင် သစ်များ တင်ဆောင် ထားသည့် တုန်ဖုန်းယာဉ် သုံးစီးကို ထပ်မံ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ များမှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွားခဲ့သည်။
သိမ်းဆည်း ရမိသော သစ်တင်ယာဉ် ခြောက်စီးပေါ်မှ တရားမဝင် ပိတောက် သစ်ခွဲသားနှင့် သစ်လုံး အရွယ်မျိုးစုံ ၂၇ တန်ခန့် (ကာလ တန်ဖိုးကျပ် ၆၇၅ဝဝဝဝ) တို့ကို သိမ်းဆည်း ရမိပြီး မိုင်းဖြတ်မြို့ ရှိ သစ်တော ဦးစီးဌာနသို့ စနစ်တကျ အပ်နှံ၍ ထွက်ပြေး သွားသော ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ များကို ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ (၁၀၀)
AA သောင်းကျန်းသူများ ကိုင်ဆောင်သည့် လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိ
သိမ်းဆည်းရမိ AA သောင်းကျန်းသူများ ကိုင်ဆောင်သည့် လက်နက်များကို တွေ့ရစဉ်
AA သောင်းကျန်းသူများ ကိုင်ဆောင်သည့် လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိ နေရာပြပုံ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော် မြို့နယ် ကုလားချောင်း ကျေးရွာနှင့် အနီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများတွင် AA သောင်းကျန်းသူများ စိမ့်ဝင် ခိုအောင်းလျက် ရှိခြင်းကြောင့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက နယ်မြေ ရှင်းလင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ AA သောင်းကျန်းသူ အချို့နှင့် လက်နက် ခဲယမ်းများ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီး ရမိလျက် ရှိသည်။
ထို့ပြင် စပါးဆိပ်ကျေးရွာ နှင့် ကုလားကျ ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဧပြီ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက အသေးစိတ် ဖြန့်ခွဲရှင်းလင်း ခဲ့ရာ ကုလားကျ ကျေးရွာ၏ အနောက် တောင်ဘက် နှစ်မိုင်ခန့် အကွာရှိ သဘာဝ ကျောက်လိုဏ်ဂူ အတွင်း၌ ကျောက်တုံးများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော အမ် (၂၂)ပုံစံ သေနတ် ငါးလက်၊ အမ်(၂၅)ပုံစံ သေနတ် လေးလက်၊ စုစုပေါင်း ကိုးလက်ကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။ ၄င်းနေရာ ဝန်းကျင်ကို ဆက်လက် ရှင်းလင်းရှာဖွေ ခဲ့ရာ ပေ ၅ဝ ခန့်အကွာ၌ သစ်ရွက်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော အမ် (၂၂) ပုံစံသေနတ် ခြောက်လက် နှင့် အမ်(၂၅) ပုံစံသေနက် လေးလက်၊ စုစုပေါင်း ၁ဝ လက်အား ထပ်မံသိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
သိမ်းဆည်း ရမိသော လက်နက်မျိုးစုံ ၁၉ လက်ကို အသေးစိတ် စိစစ်ခဲ့ရာ တစ်ဖက်နိုင်ငံထုတ် လက်နက်ပုံစံ အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး လက်နက်များ၏ ကိုယ်ထည်တွင် စက်ဝိုင်းအတွင်း၌ ခုနစ်ထောင့်ကြယ် ပုံပါရှိသည့် သင်္ကေတ M-22 ၊ M-25 စသည့် သေနတ် အမျိုးအစား စာသားနှင့် KIA (ကချင်)အဖွဲ့ ကိုင်ဆောင် အသုံးပြုသည့် လက်နက်များ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်သော KO အက္ခရာ ပါရှိသည့် သေနတ်နံပါတ်များ ရိုက်နှိပ် ထားကြောင်းနှင့် AA သောင်းကျန်းသူ များက သိုဝှက်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
နယ်မြေအတွင်း AA သောင်းကျန်းသူများ ခိုအောင်း နေထိုင်ခြင်း မရှိစေရေး အတွက် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက ဒေသခံပြည်သူများ နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ သတင်းဖော်ထုတ် ရှင်းလင်းလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ (၁၀၀)
Labels: တပ်မတော်ရေးရာ, လက်နက်ခဲယမ်း, သောင်းကျန်းသူသတင်း
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၉-၄-၂၀၁၅) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
Posted by myawady at 6:27 PM No comments:
မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုများဖြင့် အစားအစာချက်ပြုတ်နွှေးလျှင် အာဟာရအရည်အသွေး အချို့ ပျက်စီးစေနိုင်
၀ါရှင်တန် ၊ ၂၈-၄-၂၀၁၅
မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုများသည် အစားအစာကို ချက်ပြုတ်ရန် လည်းကောင်း၊ ပြန်နွှေးရန် လည်းကောင်း အလွန် အသုံးတည့် သော်လည်း အချို့ အစာ အာဟာရ အရည်အသွေးကို ပျက်စီး စေနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် အချို့ အာဟာရဓာတ် သတ္တိများကို ပိုမို ကောင်းမွန် စေနိုင်သည့် အတွက် မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုကို ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်အောင် အသုံးပြုရန် သုတေသီ များက အကြံပြု ထားသည်။
''မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်နဲ့ အစားအစာ ချက်ပြုတ်တာ ဖြစ်စေ၊ ပြန်နွှေးတာ ဖြစ်စေ အချို့ အာဟာရတွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဥပမာ အပူပေး လိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် Vitamin C နဲ့ B12 လို ဓာတ်မျိုးတွေဟာ ချက်ချင်း ပျက်စီး သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ဓာတ်သတ္တိ တွေကျတော့ အပူပေး လိုက်တဲ့အခါ ပိုပြီးအားကောင်း လာပါတယ်။ ဥပမာ မုန်လာဥနီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး တွေလို ရောင်စုံ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေကိုကြည့်ပါ။ သူတို့မှာ အဆိပ် အတောက် ဖြေပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင် ရှိတဲ့ ကာရိုတီနွိုက် လို ဓာတ်မျိုးတွေ ပါပါတယ်။ ဒီဓာတ်တွေကို ထပ်ပြီး ပွားမလာအောင် ပရိုတိန်းတွေက ထိန်းချုပ် ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပူပေး ခံရရင် သူတို့ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပရိုတိန်း ပြိုကွဲသွားလေ့ ရှိပြီး ကာရိုတီနွိုက် တွေလဲ ပိုပြီးများပြား အားကောင်း လာလေ့ ရှိပါတယ်'' ဟု ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးမှူး ဂိုင်ခရော့စ်ဘီ က ပြောပြသည်။
''မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုနဲ့ အစားအစာ ပြန်နွှေးတာဟာ တခြားနည်းတွေ ထက်တော့ ပိုကောင်း နေပါသေးတယ်။ အချိန်တိုအတွင်း အစားအစာတွေကို ပြန်နွှေး ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် Vitamin C လို အာဟာရဓာတ်တွေ ပျက်စီးတယ် ဆိုရင်တော့၊ ပျက်စီးမှုနည်း တာပေါ့'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောပြသည်။
အစားအစာများကို ချက်ပြုတ်ရာတွင် အပူပေးချိန် လျော့နည်း၍ ဖြစ်စေ၊ ရေဓာတ် အသုံးပြုမှု လျော့နည်း၍ ဖြစ်စေ၊ အာဟာရ ပျက်စီးမှု နည်းမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် သည် ဤစံချိန်စံညွှန်း အတိုင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေအနည်းငယ်ကို အသုံးပြုကာ အစားအစာကို အပူ ပေးခြင်းဖြင့် ရေငွေ့သည် အစားအစာ အတွင်းမှ အပြင်သို့ ထွက်သောကြောင့် အစားအစာပါ အာဟာရဓာတ်များ မပျောက်မပျက်ဘဲ ကျန်ရှိကြောင်း၊ ပြင်ပရေကို အစားအစာ ထဲစိမ့်ဝင် သွားအောင် ချက်ပြုတ်သည့် စနစ်သည် အာဟာရဓာတ် များကို ပျက်စီး စေကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 6:04 PM No comments:
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ စားသုံးမှုအဆင့် (၃)ရှိသော စိန်တလုံးသရက်သီး ကျွန်းလှမြို့နယ်တွင် တစ်တန်လျှင် ငွေကျပ် ၁၃ သိန်းထိ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာ
ကျွန်းလှ ၊ ၂၈-၄-၂၀၁၅
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကျွန်းလှမြို့နယ် ဒေသထွက် စိန်တလုံး သရက်သီးများကို ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများမှ မှာယူစားသုံးမှု များလာကြောင်း၊ ယခုနှစ် ရာသီပေါ် စိန်တလုံး သရက်သီး တစ်တန်လျှင် ငွေကျပ် ၁၃သိန်းထိ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက် လာခဲ့ကြောင်း လင်းရောင်ဝင်း စားသောက်ကုန် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ဒေါက်တာ လှမြင့် က ပြောပြသည်။
ပြည်တွင်းမှ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သော စိန်တလုံး သရက်သီးများသည် ဓာတု ပိုးသတ်ဆေးများ ပါဝင်ခြင်းလုံးဝ မရှိစေရန် သရက်ခြံ လုပ်သားကြီးများက အထူးကြပ်မတ် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်းလှမြို့နယ်မှ ထွက်ရှိသော ဒေသထွက် စိန်တလုံး သရက်သီး များသည် တစ်နှစ်သား မျိုးရင်းများဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းမျိုးရင်းကို မြေချပြီးနောက် သုံးနှစ်သား အရွယ်တွင် ပန်းစပြ သည်။ အဆိုပါ သရက်ပန်းများ ဖူးပွင့်ရန် တစ်လအလို ကာလတွင် သရက်ပင်များ ရေသွင်း လောင်းခြင်းကို ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး သရက်သီး အကင်းထိုးချိန် သို့ရောက်မှ ရေများ ပြန်လည် သွင်းလောင်းခြင်း ကို ပြုလုပ်စေ ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရခြင်း မှာ သရက်ပွင့်များ ပွင့်အားလိုက် စေပြီး ရွက်ညွန့်များ မထိုးစေရန်နှင့် သီးရင်း အညှာများ ပိုမိုခိုင်ခန့် စေရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း စိန်တလုံးသရက် စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
အရွယ်အစား လှပပြီး အနံ့၊ အရသာများ ကောင်းမွန်ကာ သီးထိုးပိုး ကင်းရှင်းပြီး ဓာတု ပိုးသတ်ဆေး ကင်းရှင်းသော ကျွန်းလှ ဒေသထွက် စိန်းတလုံး သရက်သီးများကို ပြည်ပ နိုင်ငံတို့သို့ အဝယ်ဒိုင်များမှ တစ်ဆင့် တင်ပို့ရောင်းချ ရာတွင် အရွယ်အစား လှပပြီး သီးလုံးချော များကို (AAA)ဆိုဒ်နှင့် (AA)ဆိုဒ်ဟု ခွဲခြား သတ်မှတ်ကာ တင်ပို့ ရောင်းချခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ပသို့ တင်ပို့ ရောင်းချသော သီးလုံး အရွယ်အစားထက် အနည်းငယ် သေးသော အသီးများကို (B) ဆိုဒ်နှင့် (C)ဆိုဒ်ဟု ဆိုကာ ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပြီး ပြည်တွင်း စားသုံးသူ ဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့ ရောင်းချလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းမှ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သော သရက်သီး များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ် ခန့်မှစတင်၍ ပြည်ပ သစ်သီး အရောင်းဈေးကွက် များသို့ တင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များက စားသုံးမှု များပြားလာပြီး စားသုံးမှု အဆင့် (၃) ထိ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်း စားသောက်ကုန် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး များက စိန်တလုံး သရက်ကို အထူးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ (၁၅၄)
Posted by myawady at 5:29 PM No comments:
Unlike its sister Inle of southern Shan State, Indawgyi in the northern part of Myanmar has no lake dwellers, but on its banks are roundabout 20 villages lining the natural water body one of the largest of its kind in Southeast Asia. The villages are populated mostly by Shan people and Kachin people whose main occupation is agriculture.
Lying in the central part of 780-km2 (300-sq mile) Indawgyi Wildlife Sanctuary, the lake in Mohnyin Township,Kachin State, harborsalarge number of animal and bird species and some of them are included in the global list of rare, threatened, endangered or near-extinct fauna.
Ten endangered bird species can be found in the lake area which is included in the nation’s key bird habitats. Of them species like Greylag Geese, Oriental Darter and Purple Swamphen are prominent during the month of January.
The lake is also circled by low lying mountains whose surface is still covered with relatively undisturbed tropical forests, where endangered primates such as Eastern Hoolock Gibbon (Hoolockleuconedys) as well as Phayre Langur (Trachypithecusphayrei) and Shortridge Langur (Trachypithecus shortridgei) can be found. The lake with its many tributaries and annually inundated wetlands is important as breeding, roosting and wintering sites for numerous birds as well as habitat for endemic and threatened water turtles and fish. A tour of the lake by motorized boat offersamagnificent view ofalarge array of wetland species.
The lake measuring 13 kilometres (8.1 miles) in horizontal width from east to west, and 24 kilometres (15 mi) in vertical length from north to south hasasurface area of area of 260 square kilometers (100 square miles).
Shwemyintzu-Pagoda situated in the middle of the lake is one of the most renowned attractions at the region. The most spectacular view is in the early evenings when the stupa cast its reflection in the setting sunlight. The annual pagoda festival held in March attracts more than 100,000 people from the surrounding areas.
There are plans to nominate the lake and its surrounding areas intoabiosphere reserve involving rural, land use and development programs.
Generally,abiosphere reserve is an area proposed by its residents, ratified byanational committee, and designated by UNESCO’s Man and Biosphere (MAB) program, which demonstrates innovative approaches to living and working in harmony with nature. One of the primary objectives of MAB is to achieveasustainable balance between the goals of conserving biological diversity, promoting economic development, and maintaining associated cultural values.
Unlike the natural forest reserves, biosphere reserves conduct socioeconomic development undertakings in harmony with the task of maintaining and protecting the wildlife and nature to stay untouched. So the project is suitable for the Indawgyi Wildlife Sanctuary and the lake itself as they areahaven foraroundabout number of 24 rare animal species, 350 forest bird species, 99 aquatic bird species, 37 species of mammals, and over 80 fish species.
Biosphere reserves have three interrelated zones that aim to fulfi l three complementary and mutually reinforcing functions.
The core area comprisesastrictly protected ecosystem that contributes to the conservation of landscapes, ecosystems, species and genetic variation.
The buffer zone surrounds or adjoins the core areas, and is used for activities compatible with sound ecological practices that can reinforce scientifi cresearch, monitoring, training and education.
By establishingabiosphere reserve, the project will provideabasis for sustainable rural development and resource management that allows full participation of the local community.
It will also ensure longterm protection of ecosystems to preserve habitats for flora and fauna while taking into account of the needs of local communities.
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၁၈) အမှတ်(၃၂)
လောက်ကိုင်မြို့တွင်း ၌ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၇၇၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
လောက်ကိုင်မြို့အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိ တရားခံများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို တွေ့ရစဉ်
နေပြည်တော် ၊ ၂၈-၄-၂၀၁၅
လောက်ကိုင်ဒေသ အတွင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး အတွက် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက လုံခြုံရေး တာဝန်များ ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပြီး တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချမှု မရှိစေရေး တို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
ထိုသို့ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ ဧပြီ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် လောက်ကိုင်မြို့၊ ရပ်ကွက်(၂)၊ အောက်ဈေး အနောက်ဘက်၊ ကလေး အားကစား စကိတ်ကွင်း အနီးရှိ လူနေ တိုက်တန်းကို ရှောင်တခင် စစ်ဆေးစဉ် ၄င်းလူနေ တိုက်တန်းအတွင်း မှ အမျိုးသား ၂၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး စုစုပေါင်း ၂၃ ဦးတို့အား ကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ ခန့် ရှိသော အိုက်စ် သုည ဒသမ ၅ ကီလိုဂရမ်၊ ကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၂၆၁ဝ ခန့်ရှိသော WY စာတန်းပါ နီညိုရောင် စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြား ၁၇၄ဝဝဝ ၊ ကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၆ဝ ခန့်ရှိသော နီညိုရောင် စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးမှုန့် သုည ဒသမ ၃ ကီလိုဂရမ် နှင့် ကာလတန်ဖိုး ကျပ်လေးသောင်း ခန့်ရှိသော ဘိန်းဖြူမှုန့် သုည ဒသမ ၂ ဂရမ် စုစုပေါင်း ကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၂၇၇ဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ရမိသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး များကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Labels: တပ်မတော်ရေးရာ, မူးယစ်ဆေးဝါး, မှုခင်းသတင်း
ဘွဲ့ရအမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဦး
တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (မှော်ဘီ) ဘွဲ့ရ အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း
အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် အမှာစကား ပြောကြားစဉ်
တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (မှော်ဘီ) ဘွဲ့ရ အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို ယမန်နေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မှော်ဘီတပ်နယ် ရှိ အဆိုပါ သင်တန်းကျောင်း ပြည်ထောင်စု ခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနားသို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဦး နှင့် မှော်ဘီတပ်နယ်မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ တပ်မတော် (ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (မှော်ဘီ) ကျောင်းအုပ်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဝင်းကိုကို နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဦး က သင်တန်းဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားပြီး သင်တန်းသူ များကို ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံ နှုတ်ဆက်သည်။ ဘွဲ့ရ အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)ကို သင်တန်းကာလ ကိုးလကြာ သင်ကြားပို့ချ သွားမည်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)ကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အမျိုးသမီး ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ တပ်ကြပ်ကြီး/စာရေး သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဦး အမျိုးသမီး ကွန်ပျူတာ ဒီပလိုမာ တပ်ကြပ်ကြီး/ စာရေး
သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသော သင်တန်းသူ များအား ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်စဉ်
အမျိုးသမီး ကွန်ပျူတာ ဒီပလိုမာ တပ်ကြပ်ကြီး / စာရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲကို ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (မှော်ဘီ)ရှိ ပြည်ထောင်စု ခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနားသို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းဦး နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက် ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဦး က သင်တန်းဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားပြီး သင်တန်းသူ များအား ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံ နှုတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါ သင်တန်းအား တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ အမျိုးသမီး သင်တန်းသူ ၂၁၉ ဦးဖြင့် သင်တန်း ကာလ ရက်သတ္တ ၇၇ ပတ်ကြာ သင်ကြား ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ကွန်ပျူတာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) ကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၈-၄-၂၀၁၅) အင်္ဂါနေ့
ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် မင်းကွန်းဒေသမှ ဆယ်ယူရရှိသော သစ်တစ်လုံးထွင်း လှေကြီးကို ပြည်သူများလေ့လာနိုင်ရန် ပြသထား
စစ်ကိုင်း ၊ ၂၇-၄-၂၀၁၅
ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေ ဖြစ်သော မင်းကွန်းဒေသ ၌ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါး ပြိုကျရာမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် သစ်တစ်လုံးထွင်း လှေကြီး (ပုံ)ကို အများပြည်သူ လေ့လာနိုင်ရန် အတွက် မင်းကွန်း ဒေသရှိ စက်တော်ရာ ဘုရားဝင်း အတွင်း၌ ပြသထားကြောင်း သိရသည်။
ယခု ပြသထားသော လှေကြီးမှာ မင်းကွန်း လေးဌာန ဆရာတော်ကြီး များဦးစီး၍ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်မှစတင် ဖော်ဆောင် ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်တွင် တစ်စင်းလုံး ရေပေါ်သို့ ပေါ်သည်အထိ ဖော်ဆောင် နိုင်ခဲ့၍ ညီညာ ပြန့်ပြူးသော စက်တော်ရာ ဘုရား ဆိပ်ကမ်းထိ ဆွဲသယ် ခဲ့ကြကြောင်း၊ ထိုမှ တစ်ဆင့် ယခုပြသ ထားသော နေရာထိ ပျက်စီးကျိုးပဲ့ခြင်း မရှိစေရန် အထူး ဂရုပြု၍ သယ်ဆောင် ခဲ့ကြကြောင်း၊ ယခု ပြသထားသော နေရာတွင်လည်း ရေရှည် တည်တံ့ စေရန် အတွက် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မင်းကွန်း ရွှေညောင်ပင် ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ လှေကြီးမှာ အရှည် ၇၈ ပေ၊ အကျယ် ရှစ်ပေ၊ လေးလက်မ ရှိပြီး သစ်တစ်လုံးတည်း ထွင်းထားသော ထွင်းလှေ အမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းလှေကြီး ဆယ်ယူစဉ်က ပြုတ်ထွက် သွားသော လှေနံ၊ လှေဝမ်းကို ထိန်းထားသည့် အရှည်ပေ ၅ဝ ကျော်ရှိ တံကူကြီး လေးကြောင်း ကိုလည်း လှေအနီးချပြ ထားကြောင်း၊ ထပ်မံ မကွဲအက် စေရန်အတွက် သစ်သားအသစ် များဖြင့် ချုပ်ထိန်း ထားကြောင်း သိရသည်။
''လှေကြီးကို ကြည့်ရတာ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး တွေရဲ့ လက်မှု အတတ်ပညာနဲ့ လုပ်တဲ့ သူတွေရဲ့ ခွန်အားဗလကို ဖော်ပြ နေသလိုဘဲ။ နောက်ပြီး အဲဒီ အချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ သစ်ကြီးဝါးကြီး ဘယ်လောက် ပေါများခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ပြသနေတာပဲ။ ခုနောက်ပိုင်း ဒီလောက်ကြီးတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေ မမြင်ဖူး ကြတော့ပါဘူး။ သစ်တောကြီး တွေကို ပြန်လည် ထူထောင်ပြီး ထိန်းသိမ်း သင့်ပြီလို့ နှိုးဆော် နေသလို ခံစား ရပါတယ်'' ဟု လာရောက် လေ့လာသူ တစ်ဦးက ပြောပြ၍ သိရသည်။ (၁၇၄)
Posted by myawady at 5:50 PM No comments:
ကုသိုလ်တော်ဘုရား ကျောက်စာချပ်များ ထားရှိရာ ဓမ္မစေတီများအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းမပြုနိုင်ရန် အခါကြီးရက်ကြီးတွင် သံတံခါးဖြင့် သော့ပိတ်ထားမည်
မန္တလေး ၊ ၂၇-၄-၂၀၁၅
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စာအုပ်ကြီး အဖြစ် ထင်ရှား ကျော်ကြားပြီး ယူနက်စကို အသိအမှတ်ပြု စာရင်းဝင် ဖြစ်သည့် ကုသိုလ်တော် ဘုရားကျောက်စာ များကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သည့် အနေဖြင့် လူစည်ကားသည့် အခါကြီး ရက်ကြီး များတွင် ကျောက်စာများ ထားရှိရာ သီဟိုဠ် စွယ်တော်ကြုပ် ပုံစံ ဓမ္မစေတီ များအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုနိုင်ရန် သံတံခါးကို သော့ပိတ် ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''လူစည်ကားတဲ့ အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ ဆိုရင် ဘုရားဝင်း အတွင်းကို လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့ ဘုရားဖူး ခရီးသည် တချို့က ကျောက်စာချပ်တွေ ထားရှိတဲ့ ဓမ္မစေတီတွေ ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး ကျောက်စာချပ် တွေပေါ်မှာ ရေးခြစ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ရေးခြစ်တာ တွေဟာ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် ကျောက်စာချပ် တွေကို ပျက်စီး စေနိုင်တာကြောင့် လူစည်ကားတဲ့ ရက်တွေဆို ရင် အဲဒီကို ဝင်ရောက်လို့ မရအောင် ဓမ္မစေတီ တွေရဲ့ သံတံခါးကို သော့ပိတ်ထားဖို့ စီစဉ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်တွေနဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ သုတေသန လုပ်နေတဲ့ သူတွေ ဝင်ရောက် လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သံတံခါးကို သော့ဖွင့်ပေးပြီး အထဲက ကျောက်စာကို အနီးကပ် လေ့လာနိုင်အောင် ခွင့်ပြုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်သလို ယူနက်စကို စာရင်းဝင်တဲ့ ရှေးဟောင်း ကျောက်စာချပ်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် အခုလိုမျိုး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် မှသာ ရေရှည်တည်တံ့ စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ကုသိုလ်တော်ဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ရှေးဟောင်း သုတေသန အမျိုးသား ပြတိုက် ဦးစီးဌာနနှင့် ဆစ်ဒနီ တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံခြားသား သုတေသန ပညာရှင်များ ပူးပေါင်း၍ ပဉ္စမသင်္ဂါယနာ တင်ခြင်း ဆိုင်ရာ သမိုင်း အချက်အလက်များ၊ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက် အခြေအနေ များကို လေ့လာမည့် အပြင် ကုသိုလ်တော် ဘုရား ကျောက်စာချပ် များကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ မင်ပြန်ထပ်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် ရှိကြောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေ က ယခု နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အမျိုးသား လွှတ်တော်၌ အသိပေး ပြောကြားထားပြီး ဖြစ်ရာ ကျောက်စာချပ် များကို မူလတန်ဖိုး ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ထုံးသုတ်ခြင်း၊ ဆေးရောင် သုတ်ခြင်း၊ ရွှေရေး မင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ကို ခွင့်ပြုမည် မဟုတ် သော်လည်း မူလလက်ရာ အတိုင်း မင်ပြန်ထပ်ခြင်း အတွက် အလှူရှင်များ စိတ်ဝင်စား ပါက လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ (ဝ၅ဝ)
Posted by myawady at 5:35 PM No comments:
Street kids in need of care
= Hnin Thet =
The problem does not seem serious here, but it still needs to be dealt with for it is concerned with the children who will shape the future of the country.
You can see scruffy children in tattered clothes at bus stops, roadside tea shops or eateries or train stations in the commercial capital Yangon, begging for pennies. Some of them may be as young as five while many are around ten. Some people would give them money without second thought at their request, but does it help?
Abandoned or compelled by genuine financial hardship of their families, children have come out onto streets in search of something for survival and become street kids. While some resort to begging, most of them eke outaliving, scavenging through municipal dump sites and dumps piled behind shops and factories, to find something or anything to sell for money.
The negative view of street children is that they are public nuisance and risk to security of general public. This view is usually held by governments and although some governments have carried
out programs to deal with street children, the general solution still includes sending them to orphanages, juvenile homes and correctional institutions and the objective of this is to help keep them away fromalife of crime.
The positive thing is that street kids who haveahome are secondary earners of their families. Though the money they did out of the dump may be very small amount, still it isabig contribution to their families who usually are internal migrants and leadahand-to-mouth existence.
On the fringes of the society, street children are largely excluded from government provided education and social safety net. Although the government has put compulsory primary education in place, poor parents cannot afford to send their children to school because doing so would meanaserious blow to their income needed to sustain their lives.
Illiteracy coupled with bad influences on the streets, street kids are often swayed to livealife of crime while the younger ones are particularly vulnerable to abuse. In some cases, homeless and/or abandoned children are fostered and exploited by the minder, who himself has grown on the streets, though such cases are rare here.
Again, left unattended by their parents, street kids tend to marry young, which often leads to early and unplanned pregnancy. This createsavicious circle, worsening ever.
Meanwhile, there have been reported cases of missing children on media and social network. Fortunately, the fact that child beggars here have complete body parts indicates that the country does not have gangs that kidnap children and force them to be beggars.
Giving themafew pennies may help alleviate some suffering foraday in the life ofastreet kid, but what about when those pennies are spent? Again, people view child beggars as part of organized groups, headed by criminals and thus faceamoral dilemma over whether to give some money to them for fear that it would indirectly encourage those driving child-begging business.
Here is the answer. Just give them foods, but not the coins so that they will not be exploited.
While the act of sharing makes the world beautiful, it is not the real solution to the problem. These destitute kids deservealong-term solution that tackles the root-cause of the problem.
" A simple and perfect exercise "
A simple and perfect exercise
= Maung Than Weik =
Normally, jogging is running slowly which is benefi cialespecially to older people as running for long hours may hurt their joints. Jogging, in fact, is an exercise whose benefits are far more than the financial cost.
Another advantage for senior citizens is that jogging needs lesser efforts when compared with running. It is really simple and most suitable for many especially the deskbound people. Regular jogging can make the heart stronger, control body weight, build stamina, decrease stress, and decelerate aging. Although it uses energy and needs efforts, jogging can make people feel physically vigilant and can keep their spirit up in their daily work.
As muscles are using more oxygen while running slowly and steadily, jogging improves strength or endurance. Better endurance is attained when the lungs are able to take in more oxygen for the blood to pump.
Apart from keeping mental problems including anxiety, depression and stress at bay, jogging can also prevent dreadful syndromes as diabetes, hypertension and heart attack, and also obesity which actually is their source.
A comprehensive knowledge of jogging is that it has the power of significantly reducing stress and clearing worries.
As jogging or running relieves stress which is one of the causes of cancers, some research reports even say that it can prevent cancer risks mainly breast cancer.
Other cancer risks like lung cancer, ovarian cancer and prostate cancer can also be reduced through jogging.
So, nothing in this world will be more beneficial for us than refreshing ourselves witharevitalizing jogging in the morning or evening.
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၌ သူငယ်တန်းတက်မည့် ကလေး ၁၀၇၅၅၀ ကျော်ရှိပြီး ကျောင်းဝတ်စုံ အခမဲ့ ထုတ်ပေးသွားမည်
ရန်ကုန် ၊ ၂၇-၄-၂၀၁၅
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၌ သူငယ်တန်း တက်မည့် ကျောင်းနေ အရွယ်ကလေး ၁ဝ၇၅၅ဝ ကျော်ရှိပြီး အဆိုပါ မူလတန်း ကလေးများအား ကျောင်းဝတ်စုံများ အခမဲ့ ထုတ်ပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၃) အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ စာရင်းကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်၍ အသက် ငါးနှစ်ပြည့် ကျောင်းတက်ရမည့် သူစာရင်း၊ ကျောင်းအပ်ရန် အခက်အခဲ ရှိသည့် လူစာရင်းနှင့် စာသင်ရန် အခက်အခဲ ရှိသည့် မသန်စွမ်း ကလေးများ ၏ စာရင်းများကို ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ ကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး လာမည့် ကျောင်းအပ်နှံရေး သီတင်းပတ်တွင် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများ အားလုံးကို ကျောင်းတက် ရောက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၃) အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာန မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင်နှစ် အတွက် ကျောင်းအပ်နှံ ရေးကို မေလ နောက်ဆုံးပတ်မှ စတင်လက်ခံ သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပညာသင် နှစ်တွင် မူလတန်း ကလေးများကို ကျောင်းဝတ်စုံ အခမဲ့ ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
အခမဲ့ ပညာရေးသည် ကျောင်းလခ နှင့် မိဘဆရာ အသင်းကြေးကို ကျောင်းသားများ ပေးဆောင်ရခြင်း မရှိသည့်စနစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ပညာသင်နှစ်မှ အလယ်တန်း ပညာရေးကို အခမဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး အထက်တန်း ပညာရေးကိုလည်း ၂ဝ၁၅- ၂ဝ၁၆ ပညာသင် နှစ်တွင် အခမဲ့ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၇)
ဦးပိန်တံတား ရှေးမူမပျက် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ပညာရှင်များနှင့် ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောထား တောင်းခံသွားမည်
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဦးပိန်တံတားအား ပြန်လည် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ရှေးမူလက်ရာ မပျက် ပြန်လည်ပြင်ဆင် နိုင်ရန် ပညာရှင်များ အပါအဝင် ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ သဘောထားအား ရယူ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။
အဆိုပါ တံတားသက်တမ်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၆ဝ ကျော် ရှိနေသဖြင့် အပျက်အစီး များမှာ ယခင်ကထက် ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိပြီး အဆိုပါ တံတားအား ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်ရန်မှာ အရေးတကြီး လိုအပ်လျက် ရှိရာ ထိုကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်မှုများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ရှေးမူမပျက် လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီး ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ဦးပိန်တံတားအား ပြန်လည် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ပညာရှင်များနှင့် ဒေသခံများ အပါအဝင် ပြည်သူများနှင့် တိုင်ပင်၍ အစီအစဉ် တကျ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူများ သိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ချက်များ ချမှတ်ကာ လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးပိန်တံတားအား ရှေးမူမပျက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မည် ဆိုပါက ငွေကျပ် သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းပမာဏကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ ခွင့်ပြုထားပြီ ဖြစ်သောကြောင့် တောင်သမန် ချစ်သူများအသင်း၊ ဦးပိန်တံတားကို ချစ်မြတ်နိုးသူများ၊ ရှေးဟောင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တတ်သိ ပညာရှင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ပမှ ပညာရှင်များ၊ ထေရ်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်များ စသည့် ဦးပိန်တံတား နှင့် တောင်သမန်အင်း အကြောင်း စိတ်ဝင်စား သူများကို ဖိတ်ခေါ်၍ အစည်းအဝေး ကျင်းပကာ သဘောထား ဆန္ဒ တောင်းခံ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၈)
ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းရှိ အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ်သို့ ခေါ်ဆိုရာတွင် အခက်အခဲများရှိနေသဖြင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တင်သွားမည်
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် အရေးပေါ် အကူအညီ လိုအပ်ပါက ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် ထားရှိသည့် Call centre ဖုန်းအမှတ် ၁၈၈ဝ သို့ ခေါ်ဆိုရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေသောကြောင့် နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ မြှင့်တင်မှုများ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမြန်လမ်း ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရေး အဖွဲ့မှ သိရသည်။
'' Call Centre အစီအစဉ်ကို စလုပ်လိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး အရင်ကထက် ပိုပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေ တွေကို ကူညီပေး တာတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Call Centre ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုတဲ့ အခါမှာ များသောအားဖြင့် MPT ဖုန်းနဲ့ပဲ ခေါ်လို့ရတဲ့ အတွက် အနည်းငယ် အခက်အခဲ ရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် တခြား အူရီဒူးတို့၊ တယ်လီနော တို့နဲ့လည်း ခေါ်လို့ရ နိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ် နေပါတယ်'' ဟု အမြန်လမ်း ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် ကာလအတွင်း အခက်အခဲရှိပါက Call Centre ဖုန်းအမှတ် ဝ၁ -၂၃၉၉၈၈ဝ သို့ ဆက်သွယ် ခေါ်ဆို နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း အရေးပေါ် အခြေအနေကို ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရေး အတွက် Call Centre ဝန်ဆောင်မှုကို Blue Ocean Operation Management Co., Ltd. နှင့် အမြန်လမ်း ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရေး အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်မှ စတင်ကာ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Call Centre ဝန်ဆောင်မှု စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ မတ် ၃၁ ရက်အထိ ခေါ်ဆိုမှုပေါင်း ၁၉၃၉၆ ကြိမ်ခေါ် ဆိုမှုရှိခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့် ကူညီ ဆောင်ရွက်မှု များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခက်အခဲများနှင့် အဆင်မပြေမှု များရှိလျှင် အမြန်လမ်း ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး မြို့ပြ ရုံးဖုန်း-ဝ၉- ၂၅ဝ၉ဝ ၂ဝဝ၄၊ ဝ၉ - ၂၅ဝ၉ဝ ၂ဝဝ၅ နှင့် ဝ၉-၈၅၉ ၁၇၅၇ တို့သို့ ဆက်သွယ် နိုင်ကြောင်း အမြန်လမ်း ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရေး အဖွဲ့မှ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများ အားလုံးနီးပါးတွင် စီးပွားရေးသံမှူးများ ခန့်အပ်ထားရှိရန် စီစဉ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးသံမှူး များကို နိုင်ငံတော်၏ ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံများ အားလုံးနီးပါးတွင် ခန့်အပ်ထားနိုင် စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ပြည်ပနိုင်ငံ များသို့ စေလွှတ်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးသံမှူး ကိုးဦးရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ စိစစ်ရွေးချယ် ခန့်အပ်ကာ လိုအပ်သော မွမ်းမံ သင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချ ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်၏ ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံတချို့သို့ စေလွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ အနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံ များ၏ စီးပွားရေး သတင်း အချက်အလက်များ စုဆောင်းပေးခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်နိုင်မည့် နည်းလမ်း ကောင်းများ ရှာဖွေစုံစမ်း ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံများ အားလုံး၌ စီးပွားရေးသံမှူးများ ခန့်ထားနိုင်ပါက ပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ တိုးတက်မှု ရှိလာစေရန် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ခြင်းများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင် နိုင်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်၏ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးသံမှူးများ ခန့်အပ် စေလွှတ်ထားသော နိုင်ငံတို့မှာ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အမေရိကန်၊ မလေးရှားနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တို့ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် အနေဖြင့် လည်း ပြည်တွင်းမှ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန် ပမာဏ တိုးမြင့်လာစေရန်၊ သွင်းကုန်ပို့ကုန် ပမာဏများ ဟန်ချက် ညီညာမျှတမှု ရှိစေရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ စည်းစနစ် တကျ မှန်ကန် မြန်ဆန်စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ရေးဆွဲ အကောင်အထည် ဖော်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
နှစ်ပေါင်း ၈ဝ ကျော်အတွင်း လူသေမှုနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သမိုင်းတွင် ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်လာမည့် ဒါဇင်နှင့်ချီလှုပ်ခတ်ခဲ့သော နီပေါငလျင်
နီပေါနိုင်ငံ၌ နှစ်ပေါင်း ၈ဝ ကျော် အတွင်း လူအသေအပျောက် အများဆုံး ငလျင်ကြီး တစ်ခု ဧပြီ ၂၅ ရက် နေ့လယ် ဒေသစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ ၅၆ မိနစ်တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့ရာ ယခုအချိန်ထိ စာရင်းအရ လူပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော် သေဆုံးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့သတင်း မီဒီယာများက ဖော်ပြကြသည်။ ပြင်းအား ၇ ဒသမ ၉ ရှိ ယင်းငလျင်သည် နီပေါနိုင်ငံ မြို့တော် ခတ္တမန္ဒူ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၅ဝ အကွာ မြေအောက်အနက် ၉ ဒသမ ၃ မိုင် ကို ဗဟိုပြု လှုပ်ခတ်သွားခြင်း ဖြစ်ပြီး နီပေါနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် ယဉ်ကျေးမှု လက်ရာ အများအပြားလည်း ယင်း ငလျင်ကြောင့်ပင် ပြိုကျပျက်စီး ခဲ့ရသည်။
Local people have been using basic tools to dig through
rubble in badly hit towns like Bhaktapur
ထိုအထဲတွင် ၁၉ ရာစုနှစ် အတွင်း ၁၈၃၂ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက် ခဲ့သော အထပ်ကိုးထပ်ပါ ဒီဟာရာဟာရာ မျှော်စင်ကြီးလည်း ပါဝင်သွားခဲ့ကာ ယင်းမျှော်စင် ပြိုကျမှုကြောင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ အပါအဝင် ယခုအခါ လူပေါင်း ၅ဝ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကာ သေဆုံးသူ စာရင်းကို အတည်မပြု နိုင်သေးပေ။ ယင်းမျှော်စင်သည် နီပေါနိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်ရာ နေရာများတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ အမြောက်အမြား ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် ပေးခဲ့သော အထင်ကရ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ယင်းမျှော်စင် ဆုံးရှုံးမှုသည် ရှေးဟောင်း ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် များကို မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသူများ အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ကာ ယင်းကဲ့သို့ ၁၉ ရာစု၏ လက်ရာရှားပါး မျှော်စင်မျိုး ဘယ်သောအခါမှ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထပ်မံမြင်တွေ့ ရတော့မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင် သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်း များနှင့် ရှေးဟောင်း နန်းတော်များ လည်း ထို ငလျင်ကြောင့်ပင် မြေခ ခဲ့ရရှာသည်။
A team of Indian rescue personnel look for survivors in
a Kathmandu building - such searches are still
continuing but winding down
ခန့်မှန်းချက်များ အရ မြို့တော်၏ လမ်းကြားများနှင့် အဆောက်အအုံ ပျက်များကြားတွင် ပိတ်မိနေ သူဦးရေမှာ တစ်သန်းကျော် အထိရှိနေပြီး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူလူထုနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ထမ်းများ ပူးပေါင်းကာ အပျက်အစီးများ ကြားမှ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများကို အမြန်ဆုံး ကယ်ထုတ် နိုင်ရေးကိုလည်း အပူတပြင်း ကြိုးစား နေကြကြောင်း သိရသည်။ အမေရိကန်နှင့် အိန္ဒိယ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း များလည်း နီပေါနိုင်ငံသို့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ တုံ့ပြန် လုပ်ဆောင်ရေး အဖွဲ့များကို အမြန်ဆုံး ပို့လွှတ်နိုင်ရန် စီစဉ်နေကြပြီး အမေရိကန် အစိုးရက နီပေါအတွက် ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် လတ်တလော အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်း အကူအညီ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နီပေါမြို့တော် ခတ္တမန္ဒူ၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင် ဆင်ခြေဖုံးဒေသ များရှိ အဆောက်အအုံ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း မှာလည်း ပြိုကျပျက်စီး ခဲ့ရပြီး ငလျင်သည် အရှေ့ဘက်ထိ ရိုက်ခတ်ခဲ့ကာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧဝရက်တောင် အထိပါ လှုပ်ခတ်ခဲ့ သောကြောင့် ဧဝရက် တောင်ခြေရှိ တောင်တက် အခြေစိုက်စခန်း တစ်ခုလုံး ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဧဝရက် တောင်ကို တက်နေသော တောင်တက်သမား အနည်းဆုံး ၁၇ ဦး ရေခဲတုံးများ ပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသည် ဟု နီပေါအစိုးရမှ အကြောင်းကြားချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
Rescuers have been able to take some injured people
off Mount Everest
နီပေါသည် မကြာခဏ ငလျင် အသေးစားများ လှုပ်ခတ်တတ်သည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ ဆက်တိုက် လှုပ်ခတ်သော ငလျင်မျိုး ရာစုနှစ် တစ်စုလျှင် တစ်ခုဆို သလောက် ရှားပါးလွန်း လှသည်။ အစောပိုင်း လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်သည် ပြင်းအား ၇ ဒသမ ၉ အဆင့်ရှိကာ နောက်ထပ် နာရီဝက်အကြာ တွင် ပြင်းအား ၆ ဒသမ ၇ အဆင့်ရှိ ငလျင်တစ်ခု ထပ်မံ လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး မကြာမီတွင် ဆက်တိုက် ဆိုသလို နောက်ထပ် သုံးဒါဇင်ခန့် ရှိသော ငလျင်များ ဆက်တိုက် လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန် ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးအဖွဲ့ (USGS) က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ယင်းငလျင် များသည် ခတ္တမန္ဒူမြို့တော် မြောက်ဘက် မိုင်ပေါင်းရာချီ ဝေးသော တိဗက်ဒေသ အပါအဝင် အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘူတန်နှင့် တရုတ်စသည့်နိုင်ငံ တို့အထိ ရိုက်ခတ်သွားခဲ့ပြီး လူအသေ အပျောက်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့တွင် လူအသေ အပျောက်အများ ဆုံး ဖြစ်ကာ အပျက်အစီး အများဆုံးလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ တရုတ်တွင် လူ ၁၈ ဦးနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် လူ ၂ ဦး သေဆုံးပြီး အိန္ဒိယတွင် လူပေါင်း ၄၄ ဦး ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကာ ပြိုကျပျက်စီးမှု အများအပြား လည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ကြကာ ယင်း ရိုက်ခတ်မှု ငလျင်၏ အရှိန်သည် ပြင်းအား ၅ အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ယခုအချိန်ထိ ရရှိထားသော သေဆုံးသူ စာရင်းမှာ ၂၄ဝဝ ကျော်အထိ ရှိနေပြီး ခန့်မှန်း၍ မရလောက်အောင် သေဆုံးသူ စာရင်းမှာ ဆက်လက်မြင့်တက် နိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း က ပြောကြားခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေနှင့်လည်း နီပေါနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်များ အတွက် ဝန်ထမ်းများ စေလွှတ်ကာ လိုအပ်သည့် အကူအညီ များ ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံ ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နီပေါ၏ အဆောက်အအုံများ ပြိုကျမှုမှာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ ခြင်း ကလည်း အဓိက အကြောင်းရင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး အကြီးအကဲ ဒန်နီအမ်စီကလင်း က ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယခုအခါ နီပေါတွင် ဆေးဝါး ပြတ်လပ်မှု ပြဿနာ၊ အစားအစာ ပြတ်လပ်မှု ပြဿနာနှင့် ဆေးရုံခုတင် မလုံလောက် သောကြောင့် လူနာများ ဆေးရုံအပြင် ဘက်တွင် အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဖြစ်နေသည့် ပြဿနာကို ရင်ဆိုင် နေရသော ကြောင့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ က နိုင်ငံတကာ အနေနှင့် အမြန်ဆုံး အကူအညီ ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ နီပေါတွင် လှုပ်ခတ်သော ယခုငလျင်သည် ၈၁ နှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံး နှင့် လူအသေအပျောက် အများဆုံး ငလျင်တစ်ခု ဖြစ်ကာ ၁၉၃၄ ငလျင်သည် လူပေါင်း ၈၅ဝဝ ကျော် သေဆုံးမှုနှင့် နီပေါသမိုင်း တွင် သေဆုံးမှု အများဆုံး မှတ်တမ်းရရှိ ထားပြီး ပြင်းအား ၈ ဒသမ ၃ အဆင့်ရှိခဲ့ သည်။ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ငလျင်မှာ နီပေါသမိုင်းတွင် ဒုတိယ အကြီးဆုံးနှင့် လူသေမှု၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ငလျင် သမိုင်းတွင် လူသေပျောက်မှု အများဆုံး ငလျင်ငါးခုရှိ ခဲ့သည်။ ၄င်းတို့မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်က လူပေါင်း ၂၆ဝဝဝ ကျော် သေဆုံးခဲ့သောပြင်းအား ၆ ဒသမ ၆ ရှိအီရန် ငလျင်၊ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်က အင်ဒိုနီးရှား ကိုဗဟိုပြုပြီး လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် ဆူနာမီဒဏ် အပါအဝင် နိုင်ငံများစွာတွင် သေဆုံးမှု ၂၃ဝဝဝ ရှိခဲ့သော ပြင်းအား ၉ ဒသမ ၁ ရှိ အင်ဒိုနီးရှားငလျင်၊ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်က လူ သေပျောက်မှု ၁ဝဝဝဝဝ ရှိခဲ့သော ပြင်းအား ၇ ဒသမ ၉ ရှိ ကက်ရ်ှမီးယား ငလျင်၊ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် လူပေါင်း ၉ဝဝဝဝ နီးပါး သေဆုံးခဲ့ ရသော ပြင်းအား ၇ ဒသမ ၉ရှိ တရုတ်ငလျင်နှင့် ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်က လူပေါင်း ၂၂ဝဝဝဝ သေဆုံးခဲ့သော ပြင်းအား ၇ ရှိ ဟေတီငလျင် တို့ဖြစ်ကြသည်။
Labels: ငလျင်သတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်းမှတ်စု